बलिउडका यी ४ अभिनेत्री जसले हजुरआमा बन्ने उमेरमा गरे विवाह ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
बलिउडका यी ४ अभिनेत्री जसले हजुरआमा बन्ने उमेरमा गरे विवाह !
२३ पुस २०७८, शुक्रबार ००:००
प्राय मानिसले विवाह छिटोनै गर्ने गर्छन् तर पछिल्लो समयमा विवाहको उमेर बढ्दै गइरहेको छ । मानिसहरु पछिल्लो समयमा आफ्नो करियरलाई फोकस गर्नतर्फ लागेको कारण पछिल्लो समयमा ढिलो विवाह गर्ने चलन बढ्दै गइरहेको छ ।
हाम्रो समाजमा २५ देखि ३५ वर्षको अन्तरालमा विवाह गर्ने गर्छन् तर सकेसम्म नेपालीहरु ३० वर्ष भित्र विवाह गरेको हामीले देख्ने गरेका छौँ । केहि कलाकारहरुको जीवनमा निकै ढिलो मात्र बिवाहले ठाउँ पाउने गरेको देख्न सकिन्छ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभई बलिउडमा पनि ढिलो विवाह गर्ने कलाकारहरु देख्न सकिन्छ। यस्तै, ढिला विवाह गर्ने केहि बलिउड कलाकारहरु को को हुन् ?जान्नुहोस्ः
पछिल्लो समय नायिका प्रिटी जिन्टा सामाजिक संजालबाट धेरै टाढा गइसकेकी छिन् तर पनि उनको डिम्पलका कारण उनको चर्चा सामाजिक संजालमा भइरहेको हुन्छ । तर प्रिटी जिन्टा कुनै समयमा निकै धेरै चलेकी थिइन्। धेरै समय पछि प्रिती चलचित्र ‘भैयाजी सुपरहिट’मा देखा परेकी थिइन्। उनले जेने गुडइनफसँग ४१ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी थिइन्।उनले २०२१ मा सेरोगेसि मार्फत दुई जुम्ल्याह बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन् ।
त्यस्तै, अर्की बलिउडकी रंगीला गर्ल उर्मिलाले मोहसिन अख्तर मीरसँग सन् २०१६ मा विवाह गरेकी थिइन्। ४२ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी उर्मिलाको अहिले सम्म कुनै बच्चा भने छैनन्। उनले धेरै ढिला विवाह गरेकी थिइन्।
बलिउडकी पुरानी नायिका नीना गुप्ताले पनि धेरै ढिलो विवाह गरेकी थिइन्। ४९ वर्षको उमेरमा विवेक मेहरासँग विवाह गरेकी थिइन् । धेरै ढिला विवाह गरेको कारण नीना गुप्तालाई हजुर आमा बन्ने उमेरमा विवाह गर्ने नायिका पनि भन्ने गरिन्छ ।
बलिउडमा मात्र नभई सानो पर्दामा पनि चर्चित रहेका नायिका सुहासिनीले विवाह गरेको उमेर सुनेर धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। यी नायिकाले २०११ मा अतुल गुर्टू नाम गरेका एक डाक्टरसँग विवाह गरेकी थिइन्। सुहासिनीले पनि हजुर आमा बन्ने उमेरमा विवाह गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति: Jan 7, 2022
बलिउडका यी ६ चुम्बन जुन बन्न पुगे एकदमै विवादित !
बलिउड बजारमा केही न केही कुरामा विवाद भइरहेको हुन्छ । बलिउडमा बेला बेलामा ‘चुम्बन’ले ठुलै
छोरीको फोटो भाइरल भएपछि तस्बिर प्रशारण नगर्न विराट-अनुष्का अपिल
बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र विराट कोहली छोरीको फोटो भाइरल भएपछि रुष्ट बनेका छन् ।
दीपिकाको हट र बोल्ड फोटोसुटका तस्विर भए भाइरल !
अभिनेत्री दिपिका पादुकोण बलिउडकी चर्चित अभिनेत्रीमध्ये एक हुन् । पादुकोण सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा सक्रिय नायिका
१२ हप्ता अघि नै जन्मिइन् प्रियंका र निककी छोरी, केही दिन अस्पतालमा राखिने
बलिउड तथा हलिउड अभिनेती प्रियंका चोपडा तथा गायक निक जोनस शनिबार आमाबाबु बनेका छन् ।
बेरोजगार भएपछि काम खोज्दै ‘सीआइडी’का शिवाजी !
पछिल्लो समय विश्वभरी फेरि कोरोनाको तेस्रो लहरले आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा पनि भारतमा पनि पछिल्लो समयमा
साउथ सुपरस्टार धनुष र ऐश्वर्या रजनीकान्तको डिभोर्स
भारतीय साउथ फिल्मका सुपरस्टार धनुष र ऐश्वर्या रजनीकान्तको डिभोर्स हुने भएको छ ।धनुश र ऐश्वर्या